Book Review 1 | Zizawa's refuge
Posted by zizawa ⋅ 12/07/2010 ⋅4Comments
FT’s Martin Wolf recommends the following; Losing Control: The Emerging Threats to Western Prosperity (Yale University Press)
There is much to admire in the hard realism of HSBC’s chief economist, writes Martin Wolf, but relative decline should not mean diminished prosperity.
Do you believe the global market economy offers bright opportunities to the west? Do you think, instead, that the best response would be to cut the west off from global trade, capital flows and immigration? Stephen King has an answer to both: you are wrong. The future is going to be tough for the western countries that have enjoyed centuries of economic and political domination. But opting out would make it worse, not better.
King is chief economist of HSBC. He is also among the most dispassionate analysts of the world economy. In this book, he providesasobering view of what is happening: western policy-makers do not understand how far the rise of emerging countries is changing the world. They suffer from the illusion that they are in control of events. But events control them, instead.
In King’s view, many western optimists mistakenly think the rise of the west was due to superior institutions, particularly the market, and superior science and technology, particularly in commercial applications. He argues, instead, that the west reached its pinnacle at least as much by rent-seeking or, to put it more bluntly, by plundering the world’s physical and human resources. Meanwhile, other civilisations “were disconnected from the world’s productivity engines through the suppression of ideas, innovations and linkages with other nations, or by the violence meted out to them by the western powers”.
Even in the postwar era, argues the book, high incomes in the west were made possible only by the privileged access of its workers to the world’s most advanced technologies and largest stock of capital. Globalisation and the rise of emerging countries are terminating all such monopoly positions.
The result, King argues, isaworld that is both different from the one the west imagines and far less friendly. Westerners fail to understand, for example, how far rates of interest are set by emerging countries, above all by China. Again, emerging country supply and demand increasingly determines prices of western imports.
The results, King insists, have included big mistakes by western policymakers, not least placing too much confidence in inflation targeting atatime of falling dollar prices of manufactures. Similarly, policymakers failed to understand how capital flows had undermined monetary autonomy.
Shifts in the global economy have, argues the book, brought large changes in the distribution of income within western countries, in favour of capital and skilled people, and against the rest. Also important is the rise of “state capitalism”: governments, not markets, are managing the outflow of capital from emerging countries; and governments are promoting bilateral deals in investment and trade that may adversely affect western interests . Meanwhile, as the west ages, it becomes dependent on immigrant workers and returns on investments in emerging countries. The former is unpopular and the latter uncertain.
As the sleeping giants awake, they will also challenge the west and, above all, the US more directly. The latter, predicts King, will find even the dollaratarnished asset.
Do I buy this line of argument? The answer is: yes, but only up toapoint. Western relative power is surely in irretrievable decline: how long could 12 per cent of the world’s population hope to dictate to the rest? The relative economic position of westerners is also deteriorating, rightly so. But it is far from clear that the rise of the rest diminishes prospects for western prosperity. That depends on how Malthusian the world turns out to be –asubject on which people disagree fiercely, without conclusive evidence.
What cannot be doubted is the scale of the economic and political adjustments ahead. Western children will live inavastly more competitive world. Handled badly, these adjustments might well lead to global political and economic breakdown. The last is also the conclusion King reaches.
Maybe, King’s position could be described as tough realism: coping with change is going to be hard, but there is no sane alternative. Marrying an integrating global economy toafragmented global polity is particularly difficult. Radical institutional reforms are surely desirable, but unlikely. The dangers ahead include the re-emergence of protectionism against trade and capital flows, particularly in response to the rise of state capitalism, and even outright conflict.
King concludes that the west can “lose small”, by adapting to the rise of the rest, or “lose big”, by resisting it, instead. He is right. The west should continue to grow more prosperous. But the days of ignoring the impact, interests and ideas of the rest are over – not before time, we must add.
« ဗမာ့ဓလေ့ထုံးစံတွေထဲက မိန်းမတွေအကြောင်း
Book Review2»
4 thoughts on “Book Review 1”
ဆရာ့ဆောင်းပါးက ကောင်းတယ်ဗျ၊ ကွန်မန့်နေရာကိုကြည့်လေ၊ ရှင်းနေတာပဲ၊ ဝါသနာတူတွေကများတော့ ဘယ်ကစပြီးပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ဖူး။
ဆောင်းပါးရဲ့ ဝေဖန်ထားတာလေးတွေက သဘောတူစရာတွေကတော့ အများစုပါ။ ပြောထားသလိုပဲ အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ ကျဆင်းမှုက ရှောင်လွဲလို့မရနိုင်ဖူးလို့ ယုံကြည်တယ်။ ဒီမိုကရေစီစနစ်အရ အများဆန္ဒကို အလေးထားရလို့ လုပ်ကိုင်နိုင်တာတွေ နှေးကွေးတာ၊ ဧရာမ အရင်းရှင်ကြီးအချို့ရဲ့လောဘ၊ ကိုယ်ကျိုးကာကွယ်ဖို့ အားထုတ်မှုတွေကလည်း ဆောင်းပါးထဲကပြောသလို အချိန်မှီအပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ ပါမယ်ထင်ပါတယ်။
တစ်ခုရှိတာကတော့ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကို တရုတ်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံထဲ လက်ဝါးကြီးအုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ မထင်ဘူး။ သူ့မှာလည်း အလုပ်သမားကိစ္စတွေတောင် နည်းနည်းပေါ်လာပြီ၊ နောင်ဆို အရှူးမီးဝိုင်းဖြစ်လာစရာ အများကြီးရှိတယ်လို့ ယုံတယ်။ မြန်မာပြည်လိုအပါအဝင် အသိပညာဗဟုသုတရဲ့ အရေးပါပုံတွေကို အသိအမှတ်မပြုတဲ့ နိုင်ငံတွေကလည်း စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကို ပုခုံးထမ်းထားပေးမယ့် အနေအထားကလည်း ထည့်တွက်ရပါမယ်။
ဒါ့ပြင် သယံဇာတအရံတွေများတဲ့ ရုရှနဲ့ သြစတျေးလျတို့ရဲ့ ကစားကွက်တွေလည်း အရေးပါလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ အတွေးအခေါ်လွတ်လပ်မှုအပေါ် အခြေခံတဲ့ ပညာရေးနဲ့ အရင်းအနှီး (ပညာရှင်နဲ့ ငွေကြေး) ဆွဲဆောင်မှုတွေကလည်း သူတို့ကိုအနည်းအကျဉ်း ကျားကန်ပေးနိုင်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
တောင်ရေးမြောက်ရေးနဲ့ ကမောက်ကမတော့ နည်းနည်းဖြစ်တယ်ဆရာ၊ ဘယ်လိုမြင်လဲ လုပ်ပါအုံး။
Posted by မန်းကိုကို | 13/07/2010, 11:56
‘ဘယ်လိုမြင်လဲ လုပ်ပါအုံး’ တဲ့။ အင်း.. အဲ့လို စစပေးတာ တော်တော်ကို မကောင်းတာပဲ။ 🙂 ကျွန်တော်မှာ deadline အတိုင်း ပြီးအောင်မလုပ်နိုင်တာတွေ တော်တော်များနေပြီ ကိုမန်းကိုရေ။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကို တရုတ်တနိုင်ငံထဲ လက်ဝါးကြီး အုပ်နိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်လည်း မထင်ပါဘူး။ တရုတ်ချမ်းသာလာတယ်ဆိုတာကိုက သူ့ကို ချမ်းသာအောင် လုပ်ပေးတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မျိုး ကမ္ဘာမှာ ရှိခဲ့လိုပဲ။ ဆိုင်တဆိုင်ဈေးရောင်းကောင်းတယ်ဆိုတာ သူ့ဆိုင်ကပစ္စည်းကို လူကြိုက်ရုံနဲ့ မရဘူး၊ တဘက်က ဖောဖောသီသီဝယ်သုံးနိုင်သူလည်း ရှိရသေးတာကိုး။ တရုတ်က အမေရိကန်တင်မက တကမ္ဘာလုံးကို ပစ္စည်းတွေ ရောင်းတယ်။ (ဘာဝယ်ဝယ် တရုတ်လုပ်ကနေ ပြေးမလွတ်ဖူး။) အမေရိကန်ကိုတော့ အဓိကရောင်းတာပေါ့ဗျာ။ အမေရိကန်တွေ ၀ယ်နိုင်အောင်ကိုပဲ တရုတ်က အမေရိကန်ကို ပိုက်ဆံချေးတယ်။ ဒီတော့ တဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင် တရုတ်ရဲ့ ကြွယ်ဝမှုဟာလည်း တကယ်တော့ အကြွေးပေါ် အခြေခံတည်ဆောက်ထားတဲ့ ကြွယ်ဝမှုပါပဲ။ တချို့ ကတော့ လက်ထဲရှိတဲ့ ငွေသားကို အကြွေးလို့ မမြင်ကြဘူး။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာ လက်ထဲရှိတဲ့ ငွေသားဟာလည်း အကြွေးတမျိုးပဲလို့ ကျွန်တော်က ယူဆတယ်။ တချိန်ကျရင် ဒီပိုက်ဆံနဲ့ တခြားပစ္စည်းတခုခု ပြန်ဝယ်လို့ရနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်နဲ့သာ ပိုက်ဆံကို လက်ခံထားတာ မဟုတ်ဖူးလား။ တကယ်လို့ ကိုယ်ယုံထားသလို ဒီပိုက်ဆံနဲ့ တခြားအရာတခုခုကို ပြန်မ၀ယ်နိုင်ရင် ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ငွေကြေးဓနဆိုတာ စက္ကူနဲ့ ဘာမှခြားမှ မဟုတ်ဖူး။ တရုတ်လက်ထဲမှာ ပြောခဲ့တဲ့ ငွေသားတွေ၊ တနည်းအားဖြင့် promisory notes တွေကတော့ အများကြီးပဲ။ ဒါပေမယ့် သူ့ငွေကြေးဓနဟာ စိတ်မချရဘူးဆိုတာ တရုတ်လည်း သဘောပေါက်တာပဲ။ ဒီတော့ သူက အမေရိကန်ဆီကနေ အဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေကို ယူချင်တယ်။ သူ့ရှိတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ အဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေ ဖလှယ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ အဆင့်မြင့် နည်းပညာ ဆိုရာမှာ သဘာဝ သိပ္ပံနည်းပညာအပြင်၊ လူမှုရေး သိပ္ပံတွေက သုတေသန လုပ်ထားတဲ့ ပညာသိုက်ကြီးလဲပါတာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် အမေရိကန်ကလည်း တရုတ်ကို ဒီအဆင့်မြင့် နည်းပညာတွေ အရောက်မခံရဲဘူး။ အရောက်မခံနိုင်ဘူး။ ဒါလည်း နားလည်လို့ရတာပဲ။ ဒါတွေပေးလိုက်ရင် သူ့သေတွင်း သူတူးသလို ဖြစ်မှာပေါ့။ ခြုံပြောရရင်တော့ ငွေကြေးဓန အများကြီး ပိုင်တာထက် အဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေကို လက်ဝါးကြီး အုပ်နိုင်သူက တကမ္ဘာလုံးကို လက်ဝါးကြီး အုပ်နိုင်မယ် ထင်တာပဲ။ ဒီတော့ တရုတ်က သူ့ငွေကြေးဓနနဲ့ အဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေကို ဘယ်လောက် စုဆောင်းနိုင်မလဲ။ ဒီမေးခွန်းရဲ့ အဖြေဟာ ကိုမန်းကို မေးတဲ့ တရုတ်က လက်ဝါးကြီး အုပ်နိုင်မလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့ အဖြေနဲ့ တူတူဖြစ်လိမ့်မယ် ထင်မြင်ပါကြောင်း….
Posted by zizawa | 13/07/2010, 13:15
ဒါနဲ့ ဒီစာအုပ်ရီဗျူးက ကျွန်တော်ရေးတာ မဟုတ်ဖူးနော်။ Financial Times က Martin Wolf ရေးတာပါ။ သူက ဒီမှာတော့ ဆရာကြီးပဲဗျ။ ကျွန်တော်လည်း တော်တော်သဘောကျတယ်။
Posted by zizawa | 13/07/2010, 13:17
I do not usually reply to blogposts but I will in this case. Seriouslyabig thumbs up for this one C CLass IP hosting!
Posted by nainia | 27/07/2010, 10:02